Kwi-P & Q, siyaqonda ukuba umgangatho ophezulu, izixhobo eziyilelwe kakuhle kwiziphumo zeemveliso ezikumgangatho ophezulu, ukusetyenziswa kakuhle kwezinto eziphathekayo kunye nesixhobo sexesha elide Ukongeza, inkqubo yokugcinwa kwesixhobo se-P & Q siqinisekisa ukusebenza ngokukuko, ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide.
Xa kuziwa kwizixhobo, sisebenzisa iindlela ezintsha kunye neendlela eziqwalaselweyo kuwo onke amanyathelo endlela.
Nokuba sithumela izixhobo ekwakheni izixhobo, senza izixhobo ezingaphakathi endlwini okanye silungisa isixhobo esele sisebenza esingafanelekanga, iP & Q iya kuqinisekisa ukuba unezixhobo ezifanelekileyo zomsebenzi.
● Ishiti yangaphakathi yentsimbi kunye nokwakha isixhobo
● Isixhobo sokuphosa ngaphakathi ngaphakathi
● Isixhobo sokwakha ukuthunyelwa ngaphandle kunye nolawulo
● Utshintsho lwezixhobo ezikhoyo nokulungiswa
● Ukugcinwa kwezixhobo kunye nokuvavanywa
● Iijigi kunye nezinto ezilungiselelwe zona
---- CNC izixhobo machining
Iijogs zokugquma Powdercoat
---- Product ezithile jigs kunye zalapho
Ukuvavanywa koxinzelelo kunye neijigs zokuqinisekisa
I-P & Q ibonelela ngesixhobo somthengi ngewaranti yobomi. Nje ukuba intlawulo yenziwe ngabathengi, i-P & Q iya kuba luxanduva lwazo zonke izixhobo zokugcina nokulungisa iindleko.
Isixhobo se-P & Q kunye ne-100, 000 yobomi bexesha eliqhelekileyo. Ukuba iiodolo zingaphezulu kwe-100, ii-000 iiPC. I-P & Q iya kwenza isixhobo esitsha xa kukho imfuneko kwaye ayizukubiza ntlawulo ngezixhobo ezivela kubathengi.
Uluhlu lwe-P & Q lokhetho lokuphosa lubanzi; ukwenza iimveliso ezisukela kwi-7 gram ukuya kwi-30 Kilograms. Uluhlu lwethu lokulahla lusebenzisa oomatshini bokuphosa abasebenza koxinzelelo oluphezulu, oomatshini abaphantsi koxinzelelo, amandla athululelwa ngesandla, nayo yonke into ephakathi.
Sinikezela ngamandla aphezulu, isinyithi esiqinileyo esomeleleyo kakhulu siyafa kunye nokusetyenziswa okukodwa, isanti yotyalo-mali. Uluhlu lwethu lokuzenzekelayo luvumela ukujongwa okuchanekileyo nokuphindaphindekayo, kunye nokukwazi ukuvumela abaxhasi bethu abanezakhono ukuba batofe ubugcisa babo ekubunjweni ngalunye. Beka ngokulula: ukuba ifuna ukuphoswa sinobuchule kunye netekhnoloji yokuyiphosa. I-P & Q yindlela elungileyo yokhetho lwakho.